နေအိမ် » လှုပ်ရှားမှု » ဟင်နရီအန္တရာယ်ကယ်ဆယ်ရေးမြည်
ထိန်းချုပ်ရေး: ထိုလူကြမ်းအဖြစ်ပယ်စစ်တိုက်ခြင်းငှါမျက်နှာပြင်ရဲ့ဘယ်ဖက်သို့မဟုတ်ညာဖက်ခြမ်းကိုနှိပ်ပါ mouse ကိုသုံးပါ။ ကူညီပါ! နဂါးယူခဲ့ပြီးဒီပျော်စရာအွန်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုဂိမ်း၌သူ၏ကယ်ဆယ်ဖို့လာရန် Kid အန္တရာယ်နှင့်ဗိုလ်ကြီးက Man မှတက်ပဲ! ဟင်နရီအန္တရာယ်ကယ်ဆယ်ရေးမြည်တဲ့အခမဲ့အွန်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုဂိမ်းခုနှစ်တွင်ဟင်နရီအန္တရာယ်ရဲ့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေဂျက်နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသောလူကြမ်းအဖြစ်အနည်းငယ်အားဖြင့်ပြန်ပေးဆွဲဖြစ်ပါတယ် Kid အန္တရာယ်နှင့်ဗိုလ်ကြီးက Man မှငါသိ၏။ ထိုလူကြမ်းအဖြစ်အသီးအသီးဆန့်ကျင်ဒေါက်တာ Minyak, ရူးသွပ်ဂရမ်, လေ့ကျင့်ခန်း Finger, က Jeff နှင့်မမြင်နိုင်သောဘရတ် Fight ။ Kid အန္တရာယ်နှင့်ဗိုလ်ကြီးက Man ဒီပျော်စရာအရေးယူမှုဂိမ်းထဲမှာဂျက်ကယ်တင်ရန်သူတို့အားလုံးကိုအနိုင်ယူကိုကူညီပါ။ ဟင်နရီအန္တရာယ်ကယ်ဆယ်ရေးမြည်နှင့်အခြားအခမဲ့အွန်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုဂိမ်း Play ။ ဟင်နရီအန္တရာယ်ကယ်ဆယ်ရေးမြည်
(5 မဲပျမ်းမျှ 4.005ထဲက)
ကစား: 53,638 tag ကို: ဟင်နရီအန္တရာယ်, ဟင်နရီအန္တရာယ်ဂိမ်း, ကယ်ဆယ်ရေးမြည်, ကယ်ဆယ်, ကယ်ဆယ်ရေးဂိမ်း, Kid အန္တရာယ်, ဗိုလ်ကြီးက Man, နဂါးဂိမ်းများ
Batman ရဲ့ Ultimate ကယ်ဆယ်ရေးသင်သည်အခမဲ့အဘို့ကစားနိုင်သည်ကိုအွန်လိုင်းမှဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ခေါင်မိုးပယ်ခုန်နှင့်အိမ်ခေါင်မိုးကနေလူကိုကယ်ဖို့သင့်ရဲ့စူပါဟီးရိုး Batman ကိုထိန်းချုပ်။ Gook ကံကောင်းပါစေ!
သငျသညျ 911 ချေါသောအခါ, ကျနော်တို့ကို double အပေါ်ရှိရ။
ဒီကောင်လေးသင့်ရဲ့မိန်းကလေးနှင့်အတူကမ်းခြေကိုသွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်, ဒါပေမယ့်အဲဒီမှာရတဲ့သူမိန်းကလေးများအတွက်အများကြီးစောင့်ရှောက်မှုမရကိုပြု၏။ တကယ်တော့အဘယျသို့သူတကယ်ချင်တယ်ကြီးမားတဲ့ကြေးဝါရခဲ့သည်။ ယခုမှာမိန်းကလေးကအရမ်းအထီးကျန်ခံစားခြင်းနှင့်စွန့်ပစ်လျက်ရှိသည်။ သူမ၏ရည်းစားအချို့သောအခြားပြုပါနေချိန်တွင်
တက်လူနှင့်တစ်ဦးဆင်းရဲဒုက္ခ ဖြစ်. ယုတစ်မိနျးကလေးကိုကယ်တင်ဖို့အချိန်! ထိုဒမြဖမ်းမိသို့မဟုတ်ကျော်ဂိမ်းရဲ့ရမနေပါနဲ့!